कोरोना भाइरसबारे सबैभन्दा पहिला थाहा पाउने डाक्टरको मृत्यु, शुरुवातमा ‘हल्लाबाज’ को संज्ञा पाएका डाक्टरलाई त्यसको एक महिनापछि भने नायकको संज्ञा पाए ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोना भाइरसबारे सबैभन्दा पहिला थाहा पाउने डाक्टरको मृत्यु, शुरुवातमा ‘हल्लाबाज’ को संज्ञा पाएका डाक्टरलाई त्यसको एक महिनापछि भने नायकको संज्ञा पाए !
कोरोना भाइरसबारे सबैभन्दा पहिला थाहा पाउने डाक्टरको मृत्यु, शुरुवातमा ‘हल्लाबाज’ को संज्ञा पाएका डाक्टरलाई त्यसको एक महिनापछि भने नायकको संज्ञा पाए !
बीबीसी । चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसबारे सबैभन्दा पहिला चेतावनी दिने एक चिनियाँ चिकित्सकको कोरोना भाइरसकै कारण निधन भएको छ। बिरामीबाट भाइरस सं क्रमित बनेका ३४ बर्षीय डा.लि वेनलियाङकोे बिहिबार वुहानमा निधन भएको चिनियाँ सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चिनियाँ सरकारी अखबार गोल्बल टाइम्सले स्रोतलाई उदृत गर्दै डा.लीको निधन बारे पुष्टि गरेको छ।
को थिए उनी ? जनवरी महिनाको शुरुवातमा वुहानका अधिकारीहरुले नयाँ कोरोना भा इरस फैलिएको बारे सुरुमा समाचार लुकाउन खोजेका थिए। यी डाक्टरले नयाँ कोरोना भा इरसबारे जानकारी दिनखोजे पनि प्रहरीले उनलाई घरमै पुगेर अफवाह बन्द गर्न चेतावनी दिएको थियो।
शुरुवातमा ‘हल्लाबाज’ को संज्ञा पाएका ती डाक्टरलाई त्यसको एक महिनापछि भने नायकको संज्ञा पाए। चिनियाँ अधिकारीको चेतावनी बाबजुद वुहानको केन्द्रीय अस्पतालको शय्याबाट डाक्टर लि वेनलियाङले विश्वलाई नयाँ कोरोना भाइरसबारे सामाजिक सन्जालमा जानकारी दिएका थिए। उनको जानकारी पछि यसबारे विश्वभर सचेतना फैलिएको हो।
डाक्टर लिका अनुसार उनले डिसेम्बर महिनामै नयाँ कोरोना भा इरस फैलिएको चाल पाएका थिए। उनी ७ वटा रोगीको उपचारमा खटेका थिए। जहाँ उनले सन् २००३ को सा र्स रोगजस्तै यस भाइरस भएको पत्ता लगाएका थिए। सा र्स भा इरस सन् २००२ नोभेम्बर देखि २००३ को जुलाईमा चीनमै देखिएको थियो। सा र्स १७ देशमा फैलँदा ७७४ को निधन हुनुको साथै ८ हजार ९८ जनामा यसको सं क्रमण देखिएको थियो। तर जब डाक्टर लिले नयाँ भा इरसबारे चेतावनी दिन थाले।
उनलाई पब्लिक सेक्युरिटी ब्युरोबाट हल्ला र त्रास फैलाएको र सामाजिक व्यवस्थामा खलल पुर्याएको आरोप लाग्यो। डिसेम्बर ३० मा लिले आफ्ना सहपाठीहरुलाई नयाँ भा इरस देखिएको र त्यसबाट बच्न मास्क तथा भा इरस प्रतिरोधी पोशाक लगाउन चेतावदी दिएका थिए। ब्युरोले चे तावनीपूर्ण भाषामा लिलाई भनेको थियो,‘हामी ग म्भीर रुपमा तपाइँलाई चेतावनी दिन्छौं, तपाइँ आफ्नो जिद्दी छाड्नुहोस्, हल्ला बन्द गर्नुहोस्।’ लिले गरेको हल्लाले समाज त्रसित र भयभित मात्र हुने बताइएको थियो।
लिमाथि अफवाह फैल्याएकोमा प्रहरीले अनुसन्धान समेत गरेको थियो। त्यसपछि जनवरीमा डाक्टर लिले चिनियाँ वेबसाइट विबोमा आफ्ना भनाइहरु प्रकाशित गरे। उनले आफूले थाहा पाएको भाइरसबारे सबै प्रस्टसँग राखे। जनवरीको पहिलो हप्ता वुहानमा डाक्टरहरुले कोरोनाबाट पीडितको उपचार सामान्य रुपमै गरिरहेका थिए। प्रहरीले अनुसन्धान गरिसकेपछि लिले एक महिलाको उपचार गर्नुपर्ने थियो। उनलाई थाहा थिएन कि उनमा नयाँ नोबल कोरोनाको सं क्रमण छ।
त्यसपछि लिपनि कोरोनाबाट सं क्रमित बने। उनले अस्पतालको शय्याबाटै आफूलाई के भइरकेको छ जानकारी दिन थालेपछि कोरोनाबारे विश्वमा सचेतना फैलिएको छ। जनवरी १० मा डाक्टर लिले आफूलाई कफ भएको विबोमा बताए। त्यसको दुई दिनपछि उनी अस्पतालमा भर्ना भए। उनको परिवार नै बिरामी पर्यो।
डाक्टर लिमा नयाँ कोरोना सं क्रमण भएको दश दिनपछि अर्थात् जनवरी २० मा चीनले कोरोना भा इरसलाई ख तराको संज्ञा दियो। चीनमा स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरियो। हाल विश्वभर प्रशंसा कमाइरहेका डाक्टर लिको बिहिबार निधन भएको हो। श्रोत दैनिक अनलाइन
न्यायका लागि साझाकाे तराजु यात्रा, माइतीघरमा सुतेरै विरोध (भिडियोसहित)
भारत लाई नाका बन्द गर्दै नेपाल